Ny FZNA no tompo-marika sy vy nahitana
Toy ny fanaony isan-taona, nanomboka ny taona 2000, dia mankalaza ny fetin’ny taranaka ny mpino sy ny kristianina rehetra ao amin’ny EKAR Notre Dame du Sacré Coeur Ambavahadimitafo. Tamin’ity taona ity dia ny Alahady 19 Jolay 2015 no nanatanterahana izany. Nitarika ny fanompoam-pivavahana sy nitory ny tenin’Andriamanitra tamin’izany, ny Pretra Ramarosoanina Jean de La Croix, izay Pretra mitantana ity Paroasy ity. Ny fetin’ny taranaka toy izao dia andro iray natokana indrindra hahatsiarovana sy hamondronana indray ireo taranaka sy zanaky ny Fiangonana izay mieli-patrana any amin’ny toerana hafa rehetra any.
Tamin’io andro io ihany koa no nanaovana ezaka valopy, hoentina hanatsarana ny Fiangonana izay efa antitra ka mila fikarakarana sy fanohanana manokana. Ary koa hoentina hananganana ny trano sekoly izay rava efa an-taonany maro lasa izao. Marihina fa ny Fiangonana Notre Dame du Sacré Cœur Ambavahadimitafo, dia anisan’ny Fiangonana Katolika niorina fahatelo teto Madagasikara, taorian’ny Katedraly Immaculée Conception Andohalo sy ny EKAR Ambohimitsimbina.
FZNA 17 taona
Tsara ny manamarika fa ny FZNA na ny “Fikambanan’ny Zanak’i Notre Dame Ambavahadimitafo”, no tompo-marika sy vy nahitana izany fetin’ny taranaka izany, 15 taona lasa izay. Marihina fa ny taona 1998 no niorina ny fikambanana FZNA. Feno 17 taona izy amin’ity taona 2015 ity. Maro ny ezaka efa vitany hoentina hanohanana sy hanatsarana ny Fiangonana, toy ny takela-bato fahatsiarovana ireo mpitandrina efa nandalo tao amin’ity fiangonana ity sy ny “enseigne lumineuse”-n‘ny Fiangonana….Santionany ihany ireo fa tsy hitsahatra hatreo akory ny ezaka ataon’ny fikambanana fa mbola maro ny asa ho sahaniny, izay hoentin’izy ireo hanohanana ny fiangonana. Maro ny filoha efa nifandimby nitondra ny fikambanana FZNA, tao anatin’izay 17 taona nijoroany izay, anisan’ireny, Randrianarisoa Elias, Randrianarivelo Karl, Rabary Hyacinthe ary ny filoha am-perinasa amin’izao fotoana dia Razaiarisoa Denise. Manodidina ny 30 eo ho eo kosa ny mpikambana, ka ireo zanaky ny fiangonana efa manam-bady no mandrafitra azy io.